Dhageyso: Xog la xiriirta xulashada abuurka iyo saameynta uu ku leeyahay tacbashada fiican. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 13, 2017	0 224 Views
Muqdisho (Himilonews) – Iniinaha la beero ee salka u ah abuurka waa tallaabta koobaad ee ka bilaabata qorshaha wax beerista – waxyar kadib marka la hubsado nuuca carrasanta ah ee ku habboon beerashada.
Waxa jira waxyaalo badan oo muhiim ah in qofka wax beeraya uu ka fikiro mar iyo marar badan.
Xulashada jaadka abuur ee mudan ee in lagu foojignaado waa dariiqa koobaad ee lagu odoroso natiijada uu ku danbeynayo. Gefna ma ahan in la yiraahdo badi fashilka ku yimaada beeraha qaar wuxuu dib ugu noqonayaa awalkii hore ee xulashada abuurkii ku habboonaa.
Fahamka ah goorta lalimayo beeraha iyo gurashadeeda, waa mid ay u wda siman yihiin badi beeraleyda. Hayeeshe sida loo xusho ama la iskugu beego cidda iyo abuurka is-qaadan kara waa mowduuc mar kasta u furan garasho dheeraad si loo xaqiiqsado in juhdiga iyo dadaalka ku baxa beeraheenna aysan u noqon bar kuma taal.
Wariyaheenna Axmed Maxamed Maxamud Haadi oo katirsan idaacadda Himilo ayuu u warramay.
Previous: Siyaasi Hungary: “Islaamku waa rajada maanta u taagan bani’aadnimada.”
Next: UNICEF: 2016 waa sanadkii ugu darnaa nolosha carruurta Syria.